Ali Durmaz ကဘယ်သူလဲ။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေAli Durmaz ကဘယ်သူလဲ။
16 / 05 / 2020 အထွေထွေ, ဘယ်သူလဲ, VIDEOS
အလီ Durmaz သူကားအဘယ်သူ
Ali Durmaz ကျေးရွာတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးဘူဂေးရီးယားရှိ Kardzhali မြို့ Rusalsko Light သည် ၁၉၃၅ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ တွင်တူရကီနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Durmaz သည်သူ၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးစီးပွားရေးစည်းကမ်းများကိုမည်သည့်အခါမျှအလျှော့ပေးလိုက်လျောရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘဲတူရကီရှိစီးပွားရေးဘဝ၏ပထမ နှစ်မှစ၍ အလီကသူ့ကိုဂျာမန်များ ဟူ၍ အမည်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် Archers Bazaar ရှိ Durmaz ၏ဆိုင်သည်မီးဖြင့်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သော ၆ လကသူ၏ဆိုင်ကိုအာမခံခဲ့သောကြောင့်သူ၏ဆုံးရှုံးမှုအချို့ကိုဖုံးအုပ်နိုင်ခဲ့သည့်ဒူမာ့စ်သည်ဆိုင်အသစ်တစ်ခုကိုမချိုးဘဲထိန်းသိမ်းထားပြီးဤတွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်သည်။
ဒါးမာ့စ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်စဉ်ကအထည်အလိပ်စက်များထုတ်လုပ်သည့် Durmaz သည်၎င်းစက်များကို ၃၇ နှစ်ကြာဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးအခြေအနေများကြောင့်ကုန်သည်များစွာသည်သူတို့၏တံခါးများကိုသော့ခတ်ခဲ့ကြပြီး Durmaz ၏ခရီးစဉ်သို့ရောက်သော stobacilar သည်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်လေးခုကိုမှာယူပြီးဆံပင်ပြုပြင်စက်များထုတ်လုပ်ခြင်းသို့တိုးခဲ့သည်။ ဤကတ်ကြေးများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတွင် Ali Durmaz ၏ 'ကျောင်းသား' ဖြစ်လာသည်။
အလီ Durmaz ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ သူ၏ဘ ၀ သည်သူ၏တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်တည်ထောင်ရန်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကအရမ်းကြိုးစားတယ်၊ သူ့အတွက်ပျော်စရာပင်အလုပ်များကြားဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါးရပ်စ်က“ ကျွန်တော့်မှာအားလပ်ရက်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး၊ ငါ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဘာကြောင့်အားလပ်ရက်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုတောင်ငါနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ငါလည်းတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာစက်ရုံကိုလာတယ်။ ငါ့အတွက် ၇ ရက်၊ တစ်ပတ် ၇ ရက်” ။ Bursa နှင့်တူရကီနိုင်ငံတို့တွင်ထုတ်လုပ်သောစက်များကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူသည်သူ့စက်ရုံများတွင်များစွာသောလူများကိုအလုပ်ခန့်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားမှပြောင်းရွှေ့လာသောလူများကိုသူတို့၏ခက်ခဲသောအချိန်များတွင်စုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်ကူညီခဲ့သည်။ Durmazlar Makine A.Ş. ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Ali Durmaz သည်စက်မှုအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဆိုင်ရာအထက်တန်းကျောင်းမှပြီး။ ဂျာမန်စကားပြောခဲ့သည်။
07.11.2004 တွင်ကွယ်လွန်သွားသောအလီ Durmaz သည် Bursa ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုအသင်း၏အသင်း ၀ င်၊ Busiad အသင်း ၀ င်၊ Uludağတက္ကသိုလ်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာနှင့်ဗိသုကာနည်းပညာဖောင်ဒေးရှင်း၊ အထည်အလိပ်အင်ဂျင်နီယာအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်၊
သူ၏ဘဝတွင်အလီ Durmaz ၏အရေးအကြီးဆုံးနိယာမမှာသူချမှတ်ထားသော၊ ဖြန့်ဖြူးလိုသောအလုပ်ကိုနားလည်ခြင်းနှင့်သူ၏မျိုးဆက်သစ်များအားအကြံပေးခြင်းဖြစ်သည်။
“ သင်အကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးသင်လုပ်ပါ။ ”
Durmaz MHP အဆိုပါတူရကီ-Sivas YHT လိုင်းလေလံတင်နှင့် ပတ်သက်. လက်ထောက်ပါလီမန်မေးခွန်းများကိုပေးခဲ့တယ်
DURMAZ တည်ဆောက်နေ TRADE ကို, LTD ။
Mecidiyeköyရှိမြို့တော်ဝန်Topbaş Ali Sami Yen သည်ကမ်းခြေ၏အစဖြစ်သည်
Düzceအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီ Ihsan ရေAkçakocadကတ္တရာသုံးသူ Work ကိုရှာခဲ့
အီတလီကုမ္ပဏီထံမှ Giresun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီ Sahin cable ကိုကားတစ်စီး Shrugged မှကန်ထရိုက်
Turk Telekom Arena လီ Sami အဘိဓါန်ယန်း SK ကိုမီထရိုလေ့လာရေးခရီး
အင်ဂျင်နီယာများ Konya ဌာနခွဲကသမ္မတအလီ Cinar, လမ်းရထားခေတ်မီခံရဖို့လိုခငျြ
Sivas အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီ Kolat, ဟောင်းမီးရထားဘူတာရုံအဆောက်အဦးဆေးရုံခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်
အဆိုပါ GESOB နိုင်ငံတော်သမ္မတအလီ Kara-, မီးရထားနိုင်ငံရေးမှခေါ်ဆိုမှုကို
သူကအီရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Ali Nikzad YHT နှင့်အတူခရီးထွက်
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၉၃၅၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် Irmak-Filyos line Ali Çetinkaya, Nafia ဦး ထုပ်၏လက်ထောက်
CHP လီ Talaq: Çiğlidမြေအောက်မှİzbeအယ်လ် Thani အလိုတော်